လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်ကလေးသူငယ်သုခချမ်းသာနှင့်ကျန်းမာရေး (၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
ကလေးအထူးကု။ 2017 နိုဝင်ဘာ; 140 (ပျော့ပျောင်း 2): S162-S166 ။ Doi: 10.1542 / peds.2016-1758X ။
Collins RL1, Strasburger VC ကို2, ဘရောင်း JD3, Donnerstein E ကို4, Lenhart တစ်ဦးက5, ရပ်ကွက် LM6.
လိင်အကြောင်းအရာသည်အစဉ်အလာမီဒီယာတွင်အလွန်အမင်းပျံ့နှံ့နေပြီးပုံဖော်မှုများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်အန္တရာယ်များ (ဥပမာကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်) ကိုဖော်ပြခဲသည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လိင်နှင့်ကျားမဆိုင်ရာသဘောထားများပြောင်းလဲခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသို့စောစီးစွာတိုးတက်ခြင်း၊ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော်ဤဆိုးကျိုးများကိုထိန်းညှိသူများနှင့်ဖျန်ဖြေသူများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်းဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ, သူတို့ရဲ့လိင် -related အကြောင်းအရာနှင့်လူငယ်အပေါ်သူတို့၏အလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာသိကြ၏။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏လေ့လာမှုအနည်းငယ်မှတွေ့ရှိချက်များအရဆိုရှယ်မီဒီယာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်လိင်ဆိုင်ရာပြသမှုများသည်ဤအကြောင်းအရာကိုတင်သူများနှင့်ကြည့်ရှုသူများအကြားပြproblemနာရှိသောယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်လူငယ်များအတွက် off-line ရင်းမြစ်များထက်ပိုမိုပြproblemနာပိုများသည်။ လူငယ်များအွန်လိုင်းတွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်သူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပွင့်လင်းမှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများပြားလာခြင်းနှင့်တိုးပွားလာခြင်းတို့ကြောင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုမှုရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကနေတဆင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေဖော်ထုတ်သင့်တယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်နှင့်အော့ဖ်လိုင်းမီဒီယာများကိုသုတေသီများကငယ်ရွယ်သောမီဒီယာပရိသတ်များအားစစ်ဆေးခြင်း၊ အပြုအမူအပေါ်လိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထိန်းညှိရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများကိုအနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များလျှော့ချခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောမီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်ဖို့ကြားဝင်အကြောင်းကြားရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မူဝါဒချမှတ်သူများအနေဖြင့်မိဘများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကလေးများ၏လိင်မှုသုခအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည့်မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီသည့်ကိရိယာများအပါအ ၀ င်ထိုကဲ့သို့သောကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်လှုံ့ဆော်သင့်သည်။
အတော်များများသောအရာတို့ကိုအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ, ယုံကြည်ချက်နှင့်အမူအကျင့်, ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့ကူညီသည်။ တစ်ခုမှာမီဒီယာဖြစ်ပါသည်။
ရုပ်မြင်သံကြား, ရုပ်ရှင်, ဂီတ, နှင့်မဂ္ဂဇင်းများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်စိတ်ခံစားမှု, တာဝန်များ, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (ဥပမာ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု, မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု) နဲ့ဆက်စပ်အန္တရာယ်များ၏အနည်းငယ်သာဆွေးနွေးမှုမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်ဆံ့။ လိင်သူတို့ခဲ့ကြပါပြီလိင်ဆွေးနွေးခြင်းဇာတ်ကောင်နှင့်အတူစကားလုံးနှင့်လုပ်ရပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်ပုံဖော်သို့မဟုတ်ရှိသည်ဖို့လိုများပြားလှပြက်လုံးများနှင့်သွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်း, လိင်ဆက်ဆံဖို့ "ထွက်အောင်" မှလှုပ်ရှားမှုများပုံဖော် "သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရိုင်းမောင်း" မှနည်းစနစ်များနှင့်မြင်ကွင်းများနှင့် ပတ်သက်. မဂ္ဂဇင်းကနေအကွံဉာဏျဖြစ်ပါတယ် ။ 2005 ခုနှစ်တွင်, ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုပိုမိုထက်သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါရှိသောပေမယ့်ဘေးကင်းလိင်၏ပုံဖော်ခြင်းရှားပါးခဲ့ကြသည်။1
သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုအမျိုးမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ, အပြုအမူများနှင့်ရလဒ်အတွက်ဆိုင်းနှင့်အတူအစဉ်အလာမီဒီယာအတွက်လိင်ထိတွေ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ 21 လေ့လာမှုများမှာတော့သုတေသီများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်အစောပိုင်းကလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှထိတွေ့မှုများအကြားတစ်ဦးအလားအလာအကြောင်းမရှိ-and effect ကိုကြားဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေ longitudinal ဒေတာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။2 အဆိုပါ 3-1 (သုတေသီများပိုင်းတွင်စစ်တမ်းကောက်ယူသည့်အခါသူ၏မီဒီယာအစားအစာလူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ သာ. ကြီးမြတ်ပမာဏပါရှိသောတွေ့ရှိခဲ့ရသောမြီးကောင်ပေါက်များ၏2longitudinal စစ်တမ်းများနောက်ဆက်တွဲအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအစပျိုးဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်နေကြသည်အများပြည်သူကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုနှစ်ကြာပြီးနောက် ) ။3-5 ဤရွေ့ကားဆက်ဆံရေးထိုကဲ့သို့သောစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဘယ်မှာ၏မိဘများ '' စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုအဖြစ်မီဒီယာအလေ့အထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတစ်ဒါဇင်သည်အခြားအချက်များများအတွက်စာရင်းကိုင်ပြီးနောက်ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏ 1 ခုနှစ်, သုတေသီများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကိုယ်ဝန်မှထိတွေ့မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။6 ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မသာအကြံပြုကြောင်းမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်ဒါပေမယ့်လည်းရာထူးတိုးလှုပ်ရှားမှုကို riskier ကြောင်း။
အတော်များများကသုတေသီများလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ယုံကြည်မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့များမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ 32 လေ့လာမှုများတစ်ဦးပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ရပ်ကွက်အတွက်7 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစားသုံးမှုပေါ့ပေါ့လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပိုပြီးမကြာခဏသို့မဟုတ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကြောင်းသဘောထားအမြင်ပိုမိုလက်ခံမှုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ အခြားလေ့လာမှု၌,8 သုတေသီများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်မြင့်မားသောမီဒီယာအစားအစာ, လိင်-related ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားနှင့်ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းမြီးကောင်ပေါက် '' လုံခြုံလိင် Self-ထိရောက်မှုခန့်မှန်းကြောင်း။ တှေ့ရှိ ပြောင်းပြန်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်တွေနဲ့သဘောထားတွေမြှင့်တင်ရန်နိုငျသောပုံပေါ်ပါတယ်။ ကွန်ဒုံးထိရောက်မှုဆွေးနွေးခြင်းတစ်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲကိုမြင်လျှင်အစီရင်ခံတင်ပြသူကိုလူငယ်ကွန်ဒုံးများသောအားဖြင့်ကိုယ်ဝန်တားဆီးရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုများပြောင်းလဲသွားတယ်။9 တစ်ဦးအပိုဆောင်းလေ့လာမှုမှာသုတေသီကျပန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ဤအကျိုးဆက်များမပါဘဲအလားတူဖြစ်စဉ်များအပေါ်အပြစ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်နောင်တ၏ပုံဖော်ခြင်းအပါအဝင်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ရှုရန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများကတာဝန်ပေးအပ်။ ဆိုးကျိုး၏ကြည့်ရှုသူများသည်အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုပြီးအပျက်သဘောအမြင်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။10 ကြားဝင်ဆောင်ရွက်သုတေသီများပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးတက်အောင်တစ်နည်းလမ်းကိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအပေါ်စာလုံးပါပြီ။
ရိုးရာမီဒီယာ, ကျားမလိင် Scripts နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Objectification
ရိုးရာမီဒီယာကိုလည်းလူငယ်အချို့ ' "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Scripts," သို့မဟုတ်ကလူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်ပြုမူသင့်တယ်ဘယ်လို shared လူ့အဖွဲ့အစည်း-Level ယုံကြည်ချက်သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ဤရွေ့ကား script များသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်အရေးကြီးလှသည်ကိုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, အပျော်အပါး, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ မြောက်အမေရိကမီဒီယာအတွင်းမှာပဲအဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုယောက်ျား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုလိုက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကျော်လိင်နှင့်ပျော်မွေ့ဦးစားပေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးပြုမူဆက်ဆံနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူခံစားချက်တွေကိုသို့မဟုတ် "ဣတ္" အပြုအမူငြင်းပယ်ဖို့ခန့်မှန်းထားသည်။ အမြိုးသမီးမြား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားလိင် passive ပြုမူသူတို့၏အလောင်းများကိုသုံးပါနှင့်လူတို့၏ဆွဲဆောင်ဖို့ကြည့်, လိင်ကျော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကတိကဝတ်ဦးစားပေး, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒ minimize ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။11 အစဉ်အလာမီဒီယာဖို့ပိုမကြာခဏထိတွေ့မှုကဤအယူအဆတွေနှင့်အမျိုးသမီးဆီသို့ misogynistic သဘောထားတွေ၏ထောက်ခံမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။7
အမျိုးသမီးများ၏လိင် objectifying ပုံဖော်ခြင်းမဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများ၏ 52%, ဂီတဗီဒီယိုများ 59% နှင့်အထီးအနုပညာရှင်များဂီတသီချင်းစာသား၏ 32% ထဲမှာပေါ်လာ။7 100 လေ့လာမှုများထက်ပိုမိုအကြောင်းအရာနှင့်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ် Self-objectification သူတို့ရဲ့ objectification objectifying မှလူငယ်များရဲ့ထိတွေ့မှုများအကြားလင့်များထင်ရှားပါပြီ။7 ပုံဖော်ခြင်း objectifying ထိတွေ့သူများသည်ဒီထိတွေ့စရာမလိုဘဲပိုပြီး၏ဒဏ်ခံသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်, ရန်ဘက်ပြုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်, မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီ, ကလေးလိင်အလွဲသုံးစားမှုဒဏ္ဍာရီများနှင့်သင်တန်းသားများကိုထက်လူ့အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သာ. ကွီးမွတျကိုယျခန်ဓာမကျေနပ်မှု, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့် disorders စားယုံကြည်မှုများခံစားရသည်။7
ဆယ်ကျော်သက်-rated ဗီဒီယိုဂိမ်း၏နှစ်ဆယ်ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါရှိသည်။12 ဒီအကြောင်းအရာ exposure အစဉ်အဆက်လိင်ခဲ့ပွီး၏တိုးမြှင့်လေးသာမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နှင့် 14 မှလူငယ် 21 အကြားမုဒိမ်းကျင့်ကြိုးစားခဲ့သို့မဟုတ်ပြီးစီးခဲ့သည်။13
အမျိုးသမီးများနေ့ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာ underrepresented နှင့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိနေကြသည်, သူတို့ကအများကြီးပိုဖွယ်ရှိတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်အတူသို့မဟုတ်လိင်အဝတ်အစားထုတ်ဖော်မှာပြခံရဖို့ယောက်ျားထက်ဖြစ်ကြသည်။7 ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးတွေကိုထိတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခြားသူများထက်မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်၏သည်းခံစိတ်ပိုမိုလက်ခံမှုဖော်ပြ။7 တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်အဖြစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားအောက်ပိုင်း Self-ထိရောက်မှုနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်များဆီသို့လျော့နည်းမျက်နှာသာသဘောထားများဖြစ်ပေါ်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။14
ရိုးရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကျနော်တို့လူမှုရေးမီဒီယာ, သူတို့ရဲ့လိင်-ဆက်စပ်အကြောင်းအရာနှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့လူငယ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, အကြောင်းကိုနည်းနည်းသိကြ၏။2 Facebook မှာ 71 ဆိုက်သုံးပြီး 13 မှဆယ်ကျော်သက်အသက်အရွယ်မရွေး 17% နှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းအသုံးအများဆုံးလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။15 2012 ကတည်းကလူငယ်များအားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုတိုးပွားလာအမျိုးမျိုးအားဖြင့်မှတ်သားထားသည်စေသည်ရာ, Facebook, Instagram ကို, Snapchat, Twitter နှင့်အခြားသူများအပါအဝင်သူတို့မကြာခဏကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များနှင့် applications များ, တစ်ခုကျွန်းစုတပ်ဆင်ပိုပြီးမြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူသွားရောက်ခဲ့ ထိုမျှလောက်ပိုပြီးခက်ခဲ social networking site များရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုတေသနပြု။16
သုတေသီများရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှထိတွေ့မှုနှင့်တိုးတက်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးထုတ်ဖော်အထက်ပါ-မှတ်ချက်ချသုတေသနအချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးမီဒီယာများ၏မြီးကောင်ပေါက် '' သုံး generalizes ရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့စတင်နေကြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလိင်-related Self-ထုတ်ဖော်ထင်ရှား (ပေါ့ပေါ့လိင်အပါအဝင်) Off-line ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။17 ဒတ်ခ်ျမြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူမကြာမီက longitudinal သုတေသနလူမှုမီဒီယာအပေါ် sexy Self-တင်ပြချက်များနှင့်ထိတွေ့နှင့်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် sexy ပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများမျှဝေခံနှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောက flirty ( "လိင်အထွက်" ရိုင်း, seductive ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခဲ့ကြောင်းမြီးကောင်ပေါက် '' ယုံကြည်ချက်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ထင်ရှား နှင့်တဦးတည်းလိင်မရရှိနိုင်ကြောင်းထင်မြင်ပေးခြင်း) ။18 ထိုသို့သောအပြုအမူအတွက်စေ့စပ်တဲ့သူရွယ်တူ၏လူငယ်ရဲ့အပြုသဘောအသိတိုးလာကြောင့်တူညီတဲ့လေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများပေါ့ပေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စိတ်အားထက်သန်မှသွယ်ဝိုက်ဆက်စပ် sexy-မိမိကိုယ်ကိုတင်ပြချက်များကိုထိတွေ့တည်ထောင်ခဲ့သည်။18
လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုလည်း Self-objectification နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုထားပါသည်လျော့နည်းသွားသည်။7 လေ့လာမှုတစ်ခုအလူမှုမီဒီယာများကအလုပ်မဖြစ်သို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဆယ်ကျော်သက်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြု "ချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်များအကြားနယ်နိမိတ်ပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်။ " လူမှုမီဒီယာမိမိကိုယ်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်, တစ်ဖက်နှင့်အတူနှုတ်ဖြင့်ရန်လိုဖြစ်ခြင်း, စောင့်ကြည့်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုများနှင့်အဘို့အခဲ့ကြသည် အကြမ်းဖက်ဇာတ်လမ်းတွဲသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဟာပြီးနောက်တဖန်ချိတ်ဆက်ပေးနေသည်။19
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာလေ့လာနေသုတေသီအများစုမီဒီယာအသုံးပြုမှုများ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြပေမယ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတိုးတက်လာဖို့သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်များ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုရောက်ရှိဖို့လူမှုရေးမီဒီယာ၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်ကိုဒီရည်မှန်းချက်နှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သေးပါဘူး။ လတ်တလောလေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများဆယ်ကျော်သက်များ၏ 10% လူမှုရေးမီဒီယာကနေကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်အများကြီးရ 23% လူမှုရေးမီဒီယာကနေအနည်းဆုံးအားအချို့အရတွေ့ရှိခဲ့; 18% အွန်လိုင်းလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများသုတေသနပြုခဲ့ကြသည်။20
sexting ဆယ်လူလာဖုန်းများဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ (စာသားသို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေ) ၏လဲလှယ်ပါဝငျသညျ။ လူငယ်များအကြား sexting ၏နှုန်းထားများလေ့လာမှုနည်းစနစ်, နမူနာဝိသေသလက္ခဏာများ, နှင့်သက်တမ်းအဓိပ္ပာယ်ဖြတ်ပြီးခြားနားသည်။21 လူငယ်၏တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာမှာတော့မိမိကိုယ်ကို၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေပေးပို့ခြင်းနှုန်း%5မှ 7% ဖြစ်ပါတယ်။22,23 %7မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15% ဟာ sexting ရကွပွီ။22,24 sexting မှာသဘာဝဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာဖွေရေးနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုထွန်းသစ်ရှုထောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။23 ဒါဟာမကြာခဏရှိပြီးသားသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးမျိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ sexting လည်းအချို့အန္တရာယ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒါဟာတခါတရံဖိအားပေးသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။25 sexting တစ်ခါတစ်ရံတွင်အနိုင်ကျင့်သို့မဟုတ်လက်စားချေတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်တတိယပါတီမှလွန်နေကြသည်။26 sexting ၏လူငယ်ပေးပို့သူတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကလေးညစ်ညမ်းဥပဒေများအောက်တွင်တရားစွဲနေကြသည်။26 နောက်ဆုံးအနေနဲ့ sexting လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပါအဝင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ, တစ် constellation ဆက်နွယ်နေကြောင်းသည်23 sexting လူငယ်နှင့်အတူအန္တရာယ်-လျှော့ချရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်လိုအပ်အကြံပြုခြင်း။
နယူးနည်းပညာများညစ်ညမ်းမှဆယ်ကျော်သက် '' access ကိုတိုးချဲ့ပါပြီ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းတချို့ပြင်းထန်စွာအရေးကြီးသောနည်းလမ်းတွေအတွက်အတိတ်၏ညစ်ညမ်းထံမှကွဲပြားနေသည်။27 အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲ "ပေါ်တွင်" ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုနှင့်မည်သည့်အရပ်ဌာန၌ access ကိုခွင့်ပြု, ခရီးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နိုင်ပါတယ်, ဒါအလားအလာတိုးလာသင်ယူမှုနှင့်ထိတွေ့မှုအချိန်လည်းရှိ၏။ အကြမ်းဖက်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအစွန်းရောက်ပုံစံများကိုအခြားလူကြိုက်များမီဒီယာထက်အင်တာနက်ကိုပိုမိုပျံ့နှံ့နေသည်။27 ပါဝင်မှုကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်သူတို့ရိုးရာမီဒီယာကိုရှာနိုင်ဘူးပစ္စည်းများရှာဖွေခွင့်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကနှင့်အမည်မသိဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အွန်လိုင်းမီဒီယာထိတွေ့မှုပိုပြီးခက်ခဲမိဘများစောင့်ကြည့်ရန်အဘို့အစဉ်အလာအကွင်းမီဒီယာထိတွေ့မှုထက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာမှုများအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ယောက်ျားလေးများကြားတွင်ဘုံနှင့်မိန်းကလေးများအကြားဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကြောင်းထုတ်ဖေါ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာ 42 တစ်နှစ်ကြားရှိမှ 10 ၏ 17% 27% သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကြည့်ရှုအားပေးဟုနှင့်အတူ, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမြင်ကြပြီ။27 15 တစ်နှစ်ကြားရှိမှ 18 တစ်ခုစာမေးပွဲ 54 ယောက်ျားလေးများ၏% နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြည့်ရှုရန်ဝန်ခံမိန်းကလေးများ 17% တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။27
သုတေသီများသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်၊ ပြိုင်ပွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏စရိုက်လက္ခဏာများစသည့်လူငယ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအပါအဝင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်သို့မဟုတ်ပစ်မှတ်ထားရန်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်။ မီဒီယာအသုံးပြုသူအားလုံးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုအခြားသူများနှင့်အတူတူပင်သိမြင်မှုစွမ်းရည်များသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှုများဖြင့်ချဉ်းကပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအချက်များအားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပြီးမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများသည်ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစစ်ဆေးသူများအဖြစ်စမ်းသပ်သင့်သည်။ ကလေးငယ်များ (၇ နှစ်မှ ၈ နှစ်အတွင်း) သည်ဖန်သားပြင်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများနှင့်အစစ်အမှန်ဘ ၀ တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်နိုင်သည်ကိုခွဲခြားရန်အခက်အခဲရှိကြသည်ကိုငါတို့သိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မီဒီယာမှလိင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးများအဘယ်အရာနှင့်မည်သို့လေ့လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနားလည်လာသည်နှင့်အမျှသိမြင်မှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲစွမ်းရည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ အလားတူပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုစီးပွားရေးနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုသည်လိင်မီဒီယာအကြောင်းအရာ၏အဓိကနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုပါအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။28 အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-သဘောတရားများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ပါတယ်။ မပြည့်စုံဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မြီးကောင်ပေါက်တွန်းများနှင့်အရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာရှာအပေါ်ပြုမူနေသည်မှအတိုင်းအတာကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပြုသဘောနိုင်ပါတယ်နှင့်ထို့ထက် ပို. သုတေသနမှလူငယ်ဆွဲ (နှင့်ဖန်တီးဖို့လူငယ် get) မှ (1) နညျးလမျးမြားကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်အပြုသဘောအကြောင်းအရာနှင့် (2) အများဆုံးအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းသရုပ်ဖော်၏ရှုထောင့်နှင့် သုခချမ်းသာ။
ဒါဟာဥပမာကြောင်းနည်းလမ်းများအမျိုးမျိုး (ဥပမာ, ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များနှင့် Cross-Section စစ်တမ်းများနှစ်ဦးစလုံး) ကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်မူလကပင်ဒီချိန်ခွင်လျှာပါဝင်သည်ကြောင်းဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြု. ဖြစ်စေကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခြကျော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူဂေဟဗေဒဆိုင်ရာတရားဝင်မှုအပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများချိန်ခွင်လျှာစိုးရိမ်ပူပန်၏စာရေးဆရာများ, (အရေးကြီးပါတယ် သဘာဝစမ်းသပ်ချက်, အမည်ခံစမ်းသပ်ထိတွေ့မှုမှခဏတုံ့ပြန်မှု၏လေ့လာမှုများ, သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်နမူနာ longitudinal စစ်တမ်းများ) ။
Clinician နှင့် Providers
Clinician လိင်, ဓတေားနှင့်မီဒီယာအပေါ်ကလေးအထူးကုမူဝါဒကကြေညာချက်၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီအတွက်အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။30
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ၏တန်ခိုးနှင့် ပတ်သက်. မိဘများပညာပေး;
မိဘများပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအသိအမှတ်ပြုရန်ကိုကူညီ tools တွေပေး, သူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့ထိတွေ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကန့်သတ်, သူတို့ကသူတို့ကလေးတွေနဲ့အတူ၎င်း၏အလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆွေးနွေးရန်ကူညီဖို့သူတို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်,
စာသင်ခန်းကျော်လွန်မီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေးယူဆန်းသစ်, သက်သေအထောက်အထား-based ကြားဝင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်, နှင့်
လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' ကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာအပေါ်၎င်းတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ, ၏အသစ်များပုံစံများကိုလေ့လာထားတဲ့သုတေသနလှုံ့ဆော်ခြင်း။
လက်ခံဧပြီလ 19, 2017 ။
ရေဗက္ကာအယ်လ် Collins, Ph.D, RAND ကော်ပိုရေးရှင်း, 1776 ပင်မ St, စန်တာမော်နီကာ,, CA 90407 မှစာပေးစာယူနေရပ်လိပ်စာ။ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ရန်ပုံငွေများ: ဒီအထူးဖြည့်စွက်, "သားသမီးတို့, ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်ဖန်သားပြင်: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပါနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လေ့လာပါဖို့လို" ကလေးများနှင့်မျက်နှာပြင်၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမှတစ်ဆင့်ဖြစ်နိုင်သောခဲ့: ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်ကလေးဖွံ့ဖြိုးရေးအင်စတီကျု။
Eyal K သည်,
Finnerty K သည်,
Donnerstein E ကို
။ တီဗီ4အပေါ်လိင်: အခိုင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦးနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အစီရင်ခံစာ။ Menlo Park, CA: ခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက; 2005
Strasburger VC ကို
။ မီဒီယာကိစ္စ: ပေမယ့် "အဟောင်း" မီဒီယာ "သစ်" မီဒီယာထက်ပိုအရေးပါလိမ့်မည်။ မြီးကောင်ပေါက် Med ပြည်နယ်အနုပညာဗြာ. 2014;25(3):643–669pmid:27120891
Hennessy M က,
Fishbein M က,
။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများအလုပ်လုပ်တယ်: မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေး။ မီဒီယာ Psychol. 2008;11(4):443–461pmid:20376301
သည် L'Engle KL,
Kenneavy K သည်,
။ sexy မီဒီယာကိစ္စ: ဂီတ, ရုပ်ရှင်, တီဗီ, နှင့်မဂ္ဂဇင်းများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကလေးအထူးကု. 2006;117(4):1018–1027pmid:16585295
Elliott သည် MN,
Berry ဟာ SH, et al
။ ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင်အကဲခတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကလေးအထူးကု။ 2004; 114 (3) ။ : မှာရရှိနိုင် www.pediatrics.org/cgi/content/full/114/3/e280pmid: 15342887
။ ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင်စောင့်ကြည့်မဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကြိုတင်ခန့်မှန်း? လူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသားပြန်လည် longitudinal စစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်။ ကလေးအထူးကု. 2008;122(5):1047–1054pmid:18977986
။ မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015 ။ J ကိုလိင် Res. 2016;53(4–5):560–577pmid:26979592
Elliott သည် M က,
Berry ဟာ SH
။ ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးဖြန်ဖြေလူမှုသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ။ J ကို Pers Soc Psychol. 2005;89(6):914–924pmid:16393024
Berry ဟာ SH,
။ ကျန်းမာလိင်ပညာပေးအဖြစ် Entertainment ကရုပ်မြင်သံကြား: မိတ်ဆွေတစ်ဦးဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ကွန်ဒုံး-ထိရောက်မှုအချက်အလက်များ၏သက်ရောက်မှု။ ကလေးအထူးကု. 2003;112(5):1115–1121pmid:14595055
။ ရုပ်မြင်သံကြားဒရာမာအတွက်လိင်များ၏သက်ရောက်မှုများထွန်းသစ်စလူကြီးများ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူအပေါ်ပြသထားတယ်။ J ကိုအသံလွှင့် Electron မီဒီယာ. 2008;52(2):161–181
Collins K သည်,
။ လိင်ကနေလိင်မှ: primetime ကွန်ယက်ကိုရုပ်မြင်သံကြားပေါ်တွင်လိင်ကွဲ script ကိုဖော်ထုတ်။ J ကိုလိင် Res. 2007;44(2):145–157pmid:17599272
Haninger K သည်,
Thompson က KM
။ ဆယ်ကျော်သက်-rated ဗီဒီယိုဂိမ်း၏အကြောင်းအရာနှင့် ratings ။ ဂျေအေအမ်အေ. 2004;291(7):856–865pmid:14970065
Strasburger VC ကို,
Mitchell က KJ
။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာထိတွေ့မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသားကောင်။ Clin ကလေး (Phila). 2014;53(13):1239–1247pmid:24928575
။ ကျား, မကျပုံစံနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို Self-အယူအဆအပေါ်အမျိုးသမီးဗီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ဆိုးကျိုးများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ. 2009;61(11–12):808–823
Lenhart တစ်ဦးက; Pew သုတေသန Center.Teens
။ လူမှုမီဒီယာနှင့်နည်းပညာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်၊ ၂၀၁၅ ။ www.pewinternet.org/files/2015/04/PI_TeensandTech_Update2015_0409151.pdf။ ဝင်ရောက်မတ်လ 3, 2016
Malden M က,
Cortedi S က, et al ။
ဆယ်ကျော်သက်, လူမှုရေးမီဒီယာ, နှင့် privacy ။ 2013 ။ : မှာရရှိနိုင် http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/။ ဝင်ရောက်စက်တင်ဘာလ 19, 2017
။ "ငါ့ကိုတက် Hit နှင့်ကျွန်တော်ဆင်းရနိုင်" အမေရိကန်လူငယ်များသည် '' အန္တရာယ်အပြုအမူများနှင့် MySpace profile များကိုများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ထုတ်ဖော်။ J ကိုကလေးမီဒီယာ. 2012;6(1):119–134
ဗန် Oosten J ကို,
ပတေရုသ J ကို,
Vandenbosch L ကို
။ မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်ပေါ့ပေါ့လိင်: အရှေ့ပြေးပုံစံ-လိုလိုလားလားမော်ဒယ်တစ်ဦးစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ခုနှစ်တွင်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအသင်းမှနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး; 21-25 စေခြင်းငှါ, 2015; စန်း Juan, Puerto Rico
။ ဆယ်ကျော်သက်ချိန်းတွေ့အကြမ်းဖက်မှုအတွက်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကိုကလေးမြီးကောင်ပေါက် Psychiatric သူနာပြု. 2010;23(3):133–142pmid:20796096
Rideout V ကို,
Zupancic H ကို,
Beaudoin-ရိုင်ယန် L ကို,
Lauricella တစ်ဦးက; မီဒီယာနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေး, ဆက်သွယ်ရေး၏ကျောင်း, Northwestern University အပေါ် Center က
။ ဆယ်ကျော်သက်, ကျန်းမာရေး, နှင့်နည်းပညာ: တစ်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်း။ 2015 ။ : မှာရရှိနိုင် cmhd.northwestern.edu/wp-content/uploads/2015/05/1886_1_SOC_ConfReport_TeensHealthTech_051115.pdf။ ဝင်ရောက်စက်တင်ဘာလ 19, 2017
Klettke B က,
Hallford DJ သမား,
Mellor DJ သမား
။ ပျံ့နှံ့ Sexting နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်: တစ်စနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ Clin Psychol ဗြာ. 2014;34(1):44–53pmid:24370714
။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် sexting: ဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်အသေးအဖှဲဆယ်ကျော်သက် text messaging မှတဆင့်လိင်ပေးသောဝတ်လစ်စလစ်သို့မဟုတ်နီးပါး-ဝတ်လစ်စလစ်ပုံရိပ်တွေစေလွှတ်ကြ၏။ 2009 ။ : မှာရရှိနိုင် www.pewinternet.org/files/old-media//Files/Reports/2009/PIP_Teens_and_Sexting.pdf။ ဝင်ရောက်စက်တင်ဘာလ 16, 2016
။ "Sexting" နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး. 2014;55(6):757–764pmid:25266148
Mitchell က KJ,
Wolak J ကို
။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်လူငယ် sexting ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: တစ်အမျိုးသားရေးလေ့လာမှု။ ကလေးအထူးကု. 2012;129(1):13–20pmid:22144706
Drouin M က,
Ross က J ကို,
Tobin E ကို
။ sexting: ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်ကျူးကျော်များအတွက်အသစ်တခု, ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်တော်ယာဉ်? ကွန်ပျူတာကလူ့ပြုမူနေ။ 2015; 50: 197-204
Wolak J ကို,
။ ဘယ်လိုမကြာခဏဆယ်ကျော်သက် sexting ဖမ်းဆီးနေကြသနည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားမှုတစ်အမျိုးသားရေးနမူနာအနေဖြင့်ဒေတာများ။ ကလေးအထူးကု. 2012;129(1):4–12pmid:22144707
။ အွန်လိုင်းလိင်: ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်နှင့် sexting ။ မြီးကောင်ပေါက် Med ပြည်နယ်အနုပညာဗြာ. 2014;25(3):574–589pmid:27120886
Halpern မှန် CT,
သည် L'Engle KL
။ အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူပါသက်တူရွယ်တူအဖြစ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး. 2005;36(5):420–427pmid:15837346
။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှုအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့ကိုခနျ့မှနျး။ J ကိုလိင် Res. 2009;46(6):586–596pmid:19382030
။ ကလေးအထူးကု၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီ။ ပေါ်လစီကြေညာချက်-လိင်, ဓတေားနှင့်မီဒီယာ။ ကလေးအထူးကု. 2010;126(3):576–582pmid:20805150